पाल्पामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा « Image Khabar
१९ भाद्र २०७८, शनिबार १८:०६
पाल्पा, भदौ १९ । सञ्चारमाध्यले बारम्बार समाचार प्रकाशन गर्न थालेपछि पाल्पा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा ल्याएको छ । स्विकृती पाएको करीब साढे ३ महिनाको अवधीमा जिल्ला अस्पताल पाल्पाले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको हो ।
संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ ४ गते नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर बजेट रकम हाल सम्म प्राप्त नभएको अस्पतालले जनाएको छ । सरकारले स्विकृत गरेको रकम बाट फेयर ट्रेड प्रा.ली.ले अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेशिनहरु खरिद गरेको हो ।
अस्पतालमै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएपछी जिल्लाका ठुला अस्पताल देखी १० वटै पालिका र घर घरमा अक्सिजन सेवा दिन सकिने अस्पताल विकास समितीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । यो प्लान्ट बाट दैनिक ५० सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन हुने र अवका दिनमा अक्सिजन अभाव बाट विरामीको मृत्यु नहुने अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।
प्लान्टबाट प्रति मिनेट ४२० लिटर अक्सिजन उत्पादन हुने, प्रति २० मिनेटमा १ वटा र दैनिक ५० वटा सिलिण्डर अक्सिजन भर्न सकिने ईन्जिनियर देवेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कोभिड १९ को दोस्रो भेरियेन्टमा अक्सिजन अभावको कारण उपचारमा निकै कठिनाई भएकोले अव अस्पतालमै प्लान्ट निर्माण भएपछी कोभिडका विरामीलाई सजिलो हुने पाल्पा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. जगदिश कुवँरले बताउनुभयो ।
पाल्पामा हालसम्म कोभिड १९ को सक्रमणबाट २१८ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला अस्पताल पाल्पामा अक्सिजन प्लान संचालनमा आएपछी जिल्लाका अस्पताल र आईसोेलेसनमा अक्सिजन अभाव नहुने देखिएको छ ।
अक्सिजन अभावको कारण कयौ विरामीहरु लाई बाध्यताबस फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अबका दिनमा भने सिधै प्लान्ट बाट अस्पतालका वेड वेडमा विरामीलाई अक्सिजन दिन सक्ने सुविधा पाल्पा अस्पतालमा भएको छ ।
हृद्यघात र हृद्यजलन के हो ? दुईबीचको फरक कसरी छुट्याउने ?
घरमै बसेर ३० सकेण्डमा थाहा पाउनुस् आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति